နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 20 2019 |2မိဖတ်ပြီးသား
"တစ်ခုမှာ loneliest အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ "—သုံးခွေးကိုညဉ့်
Ahh ... နွေရာသီအချစ်ဇာတ်လမ်း.
ဒါဟာသူတို့ရဲ့ချစ်သူများနဲ့ရာသီင်. ဥစ္စာ steamy အချစ်ဇာတ်လမ်းတ္ထုများနှင့်အကွက်-ရုံးရုပ်ရှင်များထားကြပါတယ်ဒါဟာ hit င်. သည့်အခါပူသောအပူချိန်၏မှော်အရောအနှော, ရှည်လျား Starry Night, နှင့် mellow စိတ်ချိန်းတွေ့နှင့်မိတ်လိုက်မြင်ကွင်းတစ်ခုအပေါ်ဓာတုဗေဒ "sizzling" အချို့တော်တော်လေးအားတက် add နိုင်ပါတယ်.
ဒါပေမဲ့, script မှလူတိုင်းအတွက်အတူတူမဟုတ်ပါဘူး.
ကံမကောင်းစွာပဲစတဲ့ချိန်းတွေ့ "မိုးခေါင်မှု" ကြုံတွေ့နေရသူများသို့မဟုတ်မေတ္တာကံဖြစ်ရပုံရသည်သောသူတို့အဘို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ပါ.
သင်တို့သည်ဤအချိန်မီအကြံပေးချက်များဖတ်နှင့်ဂရုပြုလျှင်တစ်ဦးမှာ "ဟုအဆိုပါ loneliest အရေအတွက်" ဖြစ်နေစရာမလိုဘူး.
6 မသက်ဆိုင်သင့်ရဲ့ status ၏ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှသိကောင်းစရာများ!
1. အဲဒီအစားသူတို့၏နေ့ရက်ကာလကိုရေတွက်ခြင်း၏, သင့်ရဲ့မင်္ဂလာများကိုရေတွက်.
မှန်တယ်. ဒါကြောင့်တစ်ဦးနှင့်အတူ cutie တက် coupled ခံရဖို့ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်နိုင်ကြသော်လည်း, တစ်ကိုယ်တော်သွားအများအပြားအားသာချက်အဖြစ်ကောင်းစွာပွေ့ဖက်ဖို့ရှိပါတယ်.
တချို့ဆန်းစစ်ကြည့်ကြစို့. သင်ဘယ်လို drop သေးပါဘူး '' စျေးဝယ်စုစုပေါင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုအကြောင်း? ထိုစိတ်ဓါတ်များတာမျိုးသည့်အခါချက်ပြုတ်ရန်? ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏အိပ်မက်များကိုလိုက်စားရန်?
ရွေးချယ်ပြီး "ကိုယ်ကျိုး" ဖြစ်.
2. နေ့စွဲကိုယ်သင်. (ခေါင်းအုံးကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တယ်စကားပြော).
သင်သည်သင်၏ဧရိယာ၌အသစ်သောစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်လူတိုင်းနှင့် ပတ်သက်. "buzzing" န်ကြောင်းကိုကြိုးစားရန်အသေခံနေကြ? သင်ကဆယ်စုနှစ်ချောကလက်နှင့်စပျစ်သီးကိုစပျစ်ရည်ဖြင့်လုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်? လုယက်ဖျက်ဆီးနဲ့ pampered ခံရဖို့? အဘယ်ကြောင့်သင်ဆင်နွှဲရန်တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်စောင့်ဆိုင်း?
ဒေါက်တာ၏စကားအတွက်. ဖီးလ်, "တစ်ခါတလေကြှနျုပျတို့ကအခြားသူများထံမှထိုက်တန်တဲ့အရာကိုကိုယ်တိုင်ပေးရန်ရှိသည်။ "
3. Self-တိုးတက်မှုများအတွက်ဤ "ကိုဆင်းအချိန်" ကိုသုံးပါ.
အလွန်ကြီးစွာသောအိမ်ထောင်ဖက်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတဦးဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်. အမှန်. အဲဒီအစားကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အဝမ်းနည်းခံစားနေရတယ်၏, ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းဖြင့်စောင့်ဆိုင်း, ထွက်လာပါပြီနှင့်အသက်ဂိမ်းသို့လာပြီကြိုးစား. ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုသင်ယူပါ. အားကစားရုံကို Join. တစ်ဦးကအခုန်လူတန်းစား sign up ပြုလုပ်ပါ. မသာအဲဒီဆောင်ရွက်ချက်များချိန်းတွေ့စျေးကွက်တွင်ပေါ်မှာသင့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်စေမည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားတိုးမြှင့်စေမည်. အဆိုးအားလုံးမေ့ထားခြင်း!
အသစ်တစ်ခုကိုဆံပင်ညှပ်တေးဂီတအဖွဲ့. မီးဖိုချောင်တွင်အသစ်တချို့ကိုချက်ပြုတ်နည်းများတက်ချက်ပြုတ်. သင့်ရဲ့အခုအခံ Redecorate. ဒေသခံတစ်ဦးဘားမှာကာရာအိုကေကိုစမ်းကြည့်ပါ.
5. အချို့သောစာဖတ်ခြင်းအပေါ်ကိုတက် Catch.
ကျနော်ဖတ်ရှုဖို့ကိုချစ်. ထိုအကျွန်တော်တို့အများစုကကောင်းတစ်ဦးစာအုပ်ထ curling အခက်အခဲရှိသည်, ရိုးရှင်းစွာအကြှနျုပျတို့ကိုအများအပြားတာဝန်ဝတ္တရားများ—ဆက်ဆံရေးနှင့်လုပ်ငန်းခွင်. အခုသင်တဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူ "တက် curling" ခံရဖွယ်ရှိမဟုတ်ပါဘူးကတည်းက, အချိန်ကိုလုပ်ရလွယ်ကူမယ့်. သင့်အသိပညာအခြေစိုက်စခန်းတိုးချဲ့ရန်ကိုဖတ်ရှုခြင်းပေမသာ; ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စကားပြောဆိုမှုကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်. အကြံပေးလိုနှစ်ခုခေါင်းစဉ်များမှာ:
"သူကသင်ဟာသို့လိုက်ရုံမယ့်" နဲ့ "တစ်ဦးနဲ့ Lady လိုပဲဥပဒေ, လူယောက်ျားကဲ့သို့စဉ်းစားပါ။ "
သင့်အဘို့အ Hoo Boo, မှန်သော? မှားသော. ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် Bruno Mars ၏စကားအတွက်, "သင်အံ့သြစရာပါပဲ, သင်မည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ "စိတ်ထဲသိမ်းထားပါ.
နွေရာသီတစ်ဦး bummer ဖြစ်နေစရာမလိုဘူး! အပြုသဘောရှိသည်ဖို့ရွေးချယ်ပါ, သင့်လျော်သောရှုထောင့်, နှင့်အတွင်းစိတ်- ငြိမ်းချမ်းရေး, ကြွင်းသောအရာဌာန၌ကျလိမ့်မည်.
သင်ကမသိခင်, သင်တစ်ဦးတည်းအတွက်ကို "မနာသီချင်းဆိုမည်" ကိုတင်ဖို့သင်ယူရပါလိမ့်မယ်.